Ama-99designs: Ukuqunjelwa phansi kwe-Logo yakho ne-Web Design
NgoLwesithathu, Novemba 25, 2009 NgoMsombuluko, Julayi 8, 2013 Douglas Karr
Ngisanda kubhala ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ne- ukukhipha umklamo wakho ngobuningi. Okuhlangenwe nakho bekukuhle futhi ngikhulume nge- Akukho Okucacisiwe ukunyakaza nokuphikisana namasayithi afana nawo. Ngokuthunyelwe okuxhasiwe, kuleli sonto ngizamile Ama-99designs.
Okuhlangenwe nakho kuma-99designs kwakufana kakhulu futhi, ngiyakuzonda ukukusho, kukabili kulula futhi kujabulise. Nginqume ukukhokhela i- isizinda esisha se-Twitter lokho kukhushulwe kangcono inkampani yami, ibhulogi yami nezinsiza zami. Ngikhokhe u- $ 100 + cishe u- $ 50 ngezimali… ubuncane nangaphansi kwama- 99designs amount recommended
Nakhu okufakiwe engikukhethe njengophumelele isizinda sami esisha se-Twitter:
Umbhali usebenzise isizinda ebesitholakala ngesiza sangemuva samahhala wabeka imininingwane engiyicele ngqo kuyo. Kuzikhombisi-ndlela zami, ngikwazile ukuthola amaphuzu futhi nganikeza ngempendulo eqondile kudizayini ngayinye nakumklami ngamunye. Abanye babaklami babesondela impela… empeleni ngangizizwa ngingalungile ngokungathengi imiklamo eminingi!
Inqubo yama-99designs iveza ngempela ubuthakathaka embonini yokwakha imidwebo yendabuko. Ngama-99designs, ngikwazile ukuthola ukuhanjiswa okuningana okuphezulu kwekhwalithi kanye nokunye obekuncane ngaphandle kwebhokisi. Lokhu kwakunjalo iphrojekthi yokuqala yomculi wami kuma-99designs futhi banqobile! Umdwebi uthathe imininingwane yami wakhiqiza isizinda esasingafani neminye imiklamo. Kusha futhi kuhlanzekile - kepha kusezingeni eliphezulu.
Kunabaqambi abangama-51,000 emphakathini we-99designs abafaka idizayini entsha kusayithi njalo ngemizuzwana eyi-10. Ama-99designs avulwa amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngesonto nazo zonke izinsuku zonyaka. Akuyona nje insizakalo yabantu abangakwazi ukukhokhela izinsiza zokwakha, noma. Ama-99designs enze imiklamo ye- Umfundisi Rick Warren (Umbhali wencwadi ethi The Purpose Driven Life) ngekhava yencwadi yakhe elandelayo,
the Iphrojekthi Esemthethweni ye-SxSW T? futhi ngisho Idizayini yokugoqa iveni yeDish Network.
Kuzoba nzima kimi ukuhlala kude nalezi zinsizakalo. Ngikhetha ngokumangalisayo nabaqambi futhi ngingabangane abahle (ngiyethemba namanje…) nabaningi. Ngihlala ngijabule futhi ngimangele ngalokho abakwazi ukukufeza. Mane nje ukuthi lezi zinsizakalo zinginikeza uhlu lwezinketho engingakwazi ukuzithola ngamafemu wokuklama wendabuko nokuxhumana.
Into eyodwa engiyifisayo Ama-99designs wenze bekuvunyelwe abaculi babo ukuthi bazikhangise bona kanye namafemu abo kuma-99designs. Ngiyabona ukuthi ngizoba nethuba lokudlula imali engama-99designs uma ngingaqonda ngqo kumculi - kepha lokho akusebenzi unikezwe izinzuzo zohlelo. Ngisazosebenzisa ama-99designs lapho ngifuna ukuphonsa okuthile laphaya futhi ngithole imibono yokudala emuva… kepha ukukhuthaza umculi namasayithi abo kungangivumela ukuthi ngidale ubudlelwano obuqhubekayo lapho lokho kuyindlela engcono.
Tags: logo ye-canonukudluliswa kwefayela okukhuluPythonRuby
Nov 25, 2009 ngo-4: 31 PM
Siyabonga ngokwabelana ngolwazi lwakho uDouglas!
Dec 20, 2009 ngo-2: 16 PM
Ngiphinde ngasebenzisa le ingemuva ku- Tumblr nekhasi futhi. Ngibuthanda kakhulu ubulula nobuhle balesi sakhiwo!